Tena nilatsahan’ny fanahy masina fa toa lasa manana toetran’Anjely tampoka teo angamba izy mianakavy, fa dia tena milaza ny hanao zavatra avokoa rehefa homen’ny vahoaka fahefana hitantana an’i Madagasikara, hono. Mety ao ihany ilay hevitra sy fomba fisaina hanasoa ny tanindrazana, saingy mahery loatra angamba ny devoly matoa izay tonga teo toa maro no nandiso fanantenana satria iray na roa teo hatreto no tena mba nahitana tara-pahazavana somary lehibe ho an’ny Malagasy ny nitantanany ny firenena, saingy narodana sy nopotehina tao anatin’ny fotoana fohy monja ny fototry ny fampandrosoana efa niainga, ka nampilentika ny anjara masoandron-dRamalagasy mandrak’androany. Tsy fitsarana ivelany fa toa maro ihany no toa amboadia mitafy hodi-janak’ondry amin’ireto kandida. Ny efa namotika sy nandoro ny efa nitsangana ve dia heverina fa mbola afaka ny hanangana amin’izao kanefa fony teo nameno paosy no natao ? Milaza fa tia tanindrazana ireto mpanao polifika, saingy tsy mahay mifandamina sy mifandrindra fa miady sisika noho ny fitiavam-pahefana sy fitiavan-tseza diso tafahoatra. Ny azo antoka aloha dia maro ny manam-bola be tsy fanta-pototra na madio na maloto holaniana amin’ny fifidianana. Raha tia tanindrazana ve tsy tonga dia manasoa vahoaka mivantana amin’ny alalan’ireny e ? Mety ho an’aliny miliara no hihodina eo, saingy handomana tapany handoavan’ny Malagasy erany aloha no tanjona kanefa raha ireo miady saritaka hahazo fahefana ireo no miezaka manao fifaninanana masina sy madio hanasoavana ny vahoaka sy ny firenena tsy ho toy izao isika. Nofy antoandro izany hatreto !